Wasiirka Amniga oo si indho la’aan ah uga hadlay weerarkii Hotel Maa’ida | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiirka Amniga oo si indho la’aan ah uga hadlay weerarkii Hotel Maa’ida
Wasiirka Amniga oo si indho la’aan ah uga hadlay weerarkii Hotel Maa’ida
Wasiirka Amniga Somaliya, Xasan Xundubey Jimcaale ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay dagaalkii saqdii dhexe ee xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in maleeshiyaad hubeysan ay weerar ku soo qaadeen barraha Ciidamada Dowladda ku leeyihiin gudaha Magaalada Muqdisho.
“Maleeshiyaad hubeysan ayaa saacadda markay ahayd 1dii habeenimo (1:00am) soo weeraray barraha Ciidamada Qalabka Sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah Caasimadda Muqdisho.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa qoraalka ku sheegay “Sarkaal u hadlay maleeshiyadaas ayaa fiidkii hore Warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin Xarumaha Dowladda, isla-markaana ay qabsadeen qaybo ka mid ah Muqdisho. Ciidamada Qalabka Sida markaa ka dib waxay galeen heegan buuxa.”
Waxa kaloo uu yiri “Maleeshiyadaasi la soo abaabulay mardhoweyd ayay weerarkii la filayay, ee ay sii sheegteen ku soo qaadeen barrihii ay ku sugnaayeen Ciidamada Qalabka Sida. Ciidamada Dowladdu way iska difaaceen weerarkaas la soo qorsheeyay, waanay ka guuleysteen maleeshiyadii weerarka soo qaaday.”
Wasiir Xundubey ayaa ugu dambeen sheegay in wixii faah faahin ee dagaalkaasi la xiriira, ay dib dadka ugala soo wadaagi doonaan, isagoona yiri “Faah faahinta weerarka la inagu soo qaaday gadaal ayaanu idin kala soo wadaagi doonnaa.”
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda ay weerarkaasi ku qaadeen ciidamada taabacsan Midowga Musharaxiinta ee ku sugan Daljirka Dahsoon iyo Hotel Maa’ida, oo ay degan yihiin Madaxweyne-yaashii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kaloo ka tirsan Midowga Musharaxiinta.
Xaalad kacsanaan ah ayaa ka jirta Caasimadda Muqdisho, xilli Midowga Musharaxiinta u diyaargaroobeen in bannaanbax nabadeed ku qabtaan Daljirka Dahsoon, iyadoo markaasi Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga dalbanayo inuu dedejiyo doorashada dalka.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Ciidamada Dowladda oo weeraray hotel ay degan yihiin madaxdii hore
Next articleWararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho iyo wadooyinka oo xiran